ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖတ်စရာများ | Digital Tea House
Notice: Undefined index: und in include() (line 21 of /domains/digitalteahouse.info/DEFAULT/sites/all/themes/digital/template/node/node--view--all-news--block.tpl.php).
Notice: Trying to access array offset on value of type null in include() (line 21 of /domains/digitalteahouse.info/DEFAULT/sites/all/themes/digital/template/node/node--view--all-news--block.tpl.php).
ဟက်ခ် တယ်ဆိုတာ ဘာလဲ ဘယ်လိုရှောင်မလဲ ( Hacking)
မိမိ အကောင့်တွေ Hack ခံရပြီဟု ဆိုလျှင် Hacking လုပ်သူအများစုမှာ နည်းပညာကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် အသုံးပြု၍ Computer များ၊ Server များကို Hack တာပဲလိိုု့ သူငယ်ချင်း စိတ်ထဲမှာတွေးကောင်းတွေးနိုင် ပါတယ်။
Signal ဆိုသည်မှာ လူတိုင်းသုံးစွဲ၍ရ​အောင်ဖွင့်ထား​ပေးပြီး မိမိတို့၏ စာ၊ ဖုန်း​ခေါ်ဆိုခြင်းများကို end-to-end encryption ကိုအသုံးပြုပြီး ကာကွယ်​ပေးထား​သော လုံခြုံစိတ်ချရသော Apllication တစ်ခုဖြစ် ပါတယ်။
လုံခြုံစိတ်ချရသော အီးမေးလ်စနစ် မိတ်ဆက် ( Proton-Mail)
ProtonMail သည် ၂၀၁၃ တွင်စတင်သော Switzerland (ဆွစ်ဇာလန်) အခြေစိုက် Mail ဝန်ဆောင်မှု တစ်ခု ဖြစ်ပြီး အသုံးပြုသူအချက်အလက်များကို" Swiss Privacy laws" နှင့်အညီ ကာကွယ်ပေးထားပါတယ်။
ရှေးရိုးစွဲအယူအဆများ၊ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများ၊ အကြမ်းဖက်ခံရမှုများနှင့် ဆက်စပ်နေသော ကျား/မအခြေပြုခွဲခြားဆက်ဆံသည့်၊ အကြမ်းဖက်သည့် ကိစ္စရပ်များကို Gender based violence ဟုခေါ်ဝေါ်ကြပါသည်။
Blackmail သည် လူတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးချင်းဆီ၏ သတင်းအချက်အလက်တွေ၊ လူသိမခံဝံ့သောအကြောင်းအရာတို့ကို အသုံးပြု၍ အကျပ်ကိုင်သော ချိန်းခြောက်မှုဖြစ်သည်။